Home Somali News Somaliland: Wasiir Ku xigeenka Khaarajiga Somaliland Oo Shir Kaga Qeyb-galay Holland
Wasiirku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland Mawliid Maxamuud Ibraahim, ayaa dalka Holland ka qayb-galay shir caalami ah oo lagaga hadlayay aqoonyahanka qurbajoogga ah ee dalalkoodda dib ugu soo noqdaa, sidii ay xirfadooda aqooneed ugu shaqeeyaan.
Shirarka noocaasi oo hay’adda socdaalka Caalamiga ah IOM Netherlands ay kala shaqayso dawlado badan oo jaalliyado ku leh dalka Holland iyo wadamada Midawga Yurub.
Shirkan oo shalay ka furmay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Netherlands ee magaaladda Amesterdam, waxaa ka qayb-galay khubarro isugu jira maxalli iyo kuwo caalami ah xirfadleyaal tiro badan oo qurba joog ah, hay’adaha ku shaqada leh xidhiidhka jaalliyadaha iyo masuuliyiin ka socotay sagaal wadan oo ay ku jirto Somaliland.
Ujeedada loo qabtay shirkaasi ayaa ku saabsanayd in lagu gorfeeyo Mashruuca soo celinta ku meel-gaadhka ah ee xirfadleyaasha wadaniga ah (Temporary Return of Qualified Nationals), kaasi oo Hay’adda socdaalka adduunak u qaabilsan ee IOM Netherlands ay ka caawiso wadamo kala duwan.
Taasi ah saamaynta togan ee mashruucaasi, wakhtiga loogu tallo galay iyo in la dhiirri-geliyo sidii aqoonyahanka xirfadleyaasha qurba-jooggu ugu gudbin lahaayeen aqoonta iyo waayo aragnimada ay leeyihiin wadamada ay u dhasheen.
Muwaadiniinta aqoonyahanka qurbajooga ah ee Somaliland ee qaybta ka ah mashruucan ayaa illaa sannadihii u dambeeyay soo kordhayay iyagoo Mihnado shaqo oo kala duwan kaga hawlgala Hay’adaha kala duwan ee dawlada Somaliland.
Dhinaca kale Hay’adda caalamiga ah ee International Organization of Immigration (IOM) Netherlands waxay kala shaqaysaa mashruucan sagaal wadan oo Somaliland iyo Soomaaliya ku jiraan iyo Afganistan, Armenia, Cape Verde, Georgia, Ghana, Iraq, Moroco iyo Sudan kuwaasi oo isu gayntoodu ay dib ugu noqdeen 800 aqoonyahan oo qurba-joog.
Mawliid Maxamuud Ibraahim